Caddayn cusub oo qadiimi ah oo caddaynaysa Cibraaniyada waxay ahaayeen madow - Afrikhepri Fondation
Sabti, abriil 10, 2021
Filimaan si aad u aragto
Qurux iyo mood
Buugaag la iibsado
Haweenka afrikaanka ah
Welcome JIIDNADA IYO DALKA
John Paul II oo leh Madonna madow iyo ilmaha Ciise
Caddaynta cusub ee qadiimiga ah ee Cibraaniyadu ahaayeen madow
Akhrinta: 9 daqiiqo
VHalkan waxaa ku yaal raadinta oo aan si gaar ah u xiisaynayo oo ay tahay in ay caddeyso aragtida ay difaaceen dad badan oo Afrikaan ah iyo Afro-farac, oo ah tii Cibraaniyadii asalka ahayd ama reer binu Israa'iil ay ahaayeen "madow". Waa mowduuc aanan aad u xiisaynayn, laakiin waxaan ogahay in saaxiibo badan oo Afrikaan iyo Masiixiyiin ahi ay xiise u qabaan.
“Khubarada cilmiga dhulka ee Isra’iil waxay soo heleen ku dhowaad 12 oo xabaal, oo asal ahaan ka soo jeeda bulshada Natufian. Waxay cadeynayaan inay ubaxyo u adeegsadeen qurxinta qabriyadooda. Sida laga soo xigtay Daniel Nadel, oo ah aqoonyahan qadiimiga ah ee Jaamacadda Haifa, bulshada Natufian ayaa hubaal ah inay tahay tii ugu horreysay inay noqdaan kuwo fadhiya. Xaqiiqdii, shukaansiga kaarboon-14 wuxuu muujinayaa in qabuuraha laga helay agagaarka Mount Carmel ay u dhexeeyaan 11 iyo 700 sano. "(1)
« Aasaasayaashii Baabuloon, oo ahaa Kuschites, waxay ka tirsanaayeen midab madow […] laakiin maahan inaan halkan ku muujino in Carabiya markii hore ay deganaayeen madow. Waxay nagu filan tahay inaan dhahno, xilligan, in madowgan ay ahaayeen reer Adit oo loo arko inay yihiin deggeneyaashii ugu horreeyay ee Carbeed; in Cibraaniyadu, markay ka hadlayaan dalalkan, inta badan isticmaalaan magaca Kuush, ugudambeyntiina in Griiggu ugu yeeraan Itobiya dadka asal ahaan ka soo jeeda koonfurta carabta Dr. Alfred Bloch (2)
Shaqadiisa Taariikhda Millennium ee Afrikaanka Aasiya, Taariikhyahan caan ah oo Afrikaan Mareykan ah, Runoko Rashidi wuxuu noo sheegayaa tan:
Jasiiradda Carabta, oo markii ugu horreysay la degganaa 8000 oo sano ka hor, waxay ahayd, sida inta badan Aasiya, waxaa ku noolaa dad madow ah. Xaqiiqdii, faracyadooda wali waxay ku nool yihiin dhamaadka koonfureed ee jasiiradda. Guud ahaan waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin veddoids oo ay ku xeeldheer yihiin aqoonyahanada cilmu-nafsiga, madowyadan ayaa maanta sameeya, gobolka, qayb muhiim ah oo ka mid ah dadka diidan Mahra. Iyagu waa kuwa ugu da'da weyn Carabtii aan naqaannay oo magacoodu wuxuu ka yimid dad asal ahaan isku mid ah, dhaqan ahaan iyo jir ahaanba, oo ku nool agagaarka Sri Lanka (Ceylon). Timahoodu way ku kala duwan yihiin waxyar oo ruxruxsan oo si kacsan leh; midabka maqaarkooda, laga bilaabo bunni khafiif ah illaa bunni mugdi ah. Iyagu waa dadkii ugu horreeyey ee deggenaa Carabta. Asal ahaan waxay ahaayeen madow wayna jireen ilaa maanta. "
Ma aqaano adiga, laakiin waxaan runtii u arkaa inay tahay mid aad u xiiso badan in qadiimiga reer binu Israa'iil ay matalaan aabayaashood qaabkooda dhabta ah. Markaa aragtida ah in Cibraaniyadii, reer banii israa'iil asal ahaan, ay ahaayeen "madow", marka la eego daahfurka cilmibaadhista, ma aha aragti ahaan laakiin waa xaqiiqo taariikheed oo la xaqiijiyay. Tani waxay kicineysaa su'aalo badan ...
Haddii dadka ugu horreeya ee reer binu Israa'iil ay ahaayeen madow, miyaanay macnaheedu ahayn in Ciise, reer binu Israa'iil, uu ahaa nin madow? Intaa waxaa dheer, Israa'iil waxay u dhigantaa Canaan ee Kitaabka Quduuska ah, laakiin waxaan ognahay in uu ahaa faracii Ham, oo ah awowgii baybalka ee madow "jinsiga" ... oo sharxi lahaa waxyaabo badan, tusaale ahaan qarsoodiga bikradaha madow. Gabdhahaani miyaanay madow noqon doonin maxaa yeelay waxay matalaan haweeney madow iyo ilmo?
Sida iska cad, waxaa jira sawirro, farshaxanno matalaya Bikrada iyo cunugga Ciise oo ah "madow", marka munaafaqnimo ma ahan in la weyddiiyo, in laga dalbado Afrikaanka, "madow" inay caabudaan nin. Caddaan Ciise, halka dad badan oo reer galbeed ah, "caddaan", ay si cad u diidi doonaan inay ammaanaan oo caabudaan ciise ciise leh tidcan, ilaah madow? Ilaa ay iyagu xukumaan dhaqaale ahaan, siyaasad ahaan iyo ruux ahaanba, cidina ma aqbali doonto inay caabudaan wakiilnimada Ilaahnimada oo aan iyagu ahayn.Ninku had iyo jeer wuxuu matalaa ilaahnimadiisa muuqaalkiisa. Haddii libaaxu metelo ilaahiisa, isagu ma matali doono bahal ama maroodi laakiin wuxuu u matali lahaa libaax, maxaa yeelay ruuxiisa libaaxa: ilaah libaax ayaa ka abuuray muuqaalkiisa. Ilaa uu yahay libaax doogga cuna ...
Atheist ayaa ii sheegi doona si kastaba ciise waa quraafaad uusan waligiis jirin. "Xaqiiqdii. Haddii Ciise jiray iyo haddii kaleba, waa khatar aad u weyn in dad lagu soo rogo avatar, sawir anthropomorphic ah oo Ilaah ama ilaahyo ka duwan sawirkaaga. Ilaah waa asal ahaan quruxsan yahay haddaba haddii loo matalo inuu yahay nin "caddaan" ah, ka dib kan dambe ayaa ku dhalan doona quruxda rabbaaniga ah, kaamilnimada rabbaaniga ah, ninka ugu habboon; rogaalcelintu waa sida runta ah. Xaqiiqdii, haddii isaga lagu matalo nin "madow" markaa madowgu wuxuu astaan ​​u noqon doonaa quruxda maxaa yeelay Ilaah, Abuuraha, Aabbuhu waa madow. Afrika hore, midabka madow wuxuu ahaa midabka Ilaah, Amon (qarsoodi ah, lama yaqaan), waxay ahayd midab madow. Alle Wusire (Osiris), Kemal (The Great Black) wuxuu ahaa mid madow.
« Waxay leeyihiin Itoobiyaanku waa kuwa ugu quruxda badan uguna dheer ragga oo dhan ”. Sababta Tani waa sababta qofka madow uu ahaa, ka qurux badnaana loo tixgeliyey maxaa yeelay waxay ku dhowaayeen midabka Ilaah. Taariikhyahan Herodotus, aabaha taariikhda, ayaa ina baraya:
Sababtoo ah waxay ahaayeen maqaar aad u madow, dhuxusha madow qaar baa oran lahaa. Madow sidii Gods.
Buugiisa Physionomie, Aristotle falsafo wuxuu qoray:
"Kuwa aadka u madow [ tani waxay khuseysaa Masaarida iyo Itoobiyaanka" (3)
Hindiya hore, midabka madow sidoo kale wuxuu ku xirnaa ilaahnimada, ilaaha Krishna.
Shaqadiisa Muujintii Kitaabka Quduuska ah iyo TW Isbarbardhig diimaha kale, TW Doane ayaa na baraya tan:
“Maya hooyada Buddha, iyo Devaki hooyada Krishna, waxaa loo caabudi jiray sida bikro; Iyaga ayaa matalayay ilmaha badbaadiyaha ah ee gacmaha ku jira, sida saxda ah ee bikradda ah Masiixiyiinta maanta loo matalayo. Maya aad ayey u nadiifsaneyd oo wax aan macquul aheyn in ilaah, nin ama Asura ay ku eegaan iyada rabitaanka jirka… Krishna iyo hooyadiis ayaa had iyo jeer lagu matalaa inay yihiin madow. Ereyga aad u weyn Krishna macnihiisu waa madow. "(4)
Aan ku noqonno Ciise.
Ma ogtahay inay jiraan waxyaabo badan oo iskaga mid ah oo u dhexeeya Krishna iyo Ciise, labada carruur ee rabaani ah?
Ereygiisa shakhsiyadeed wuxuu ahaa, "" Wiilka daa'imka ah "," aabaha "," KRST "," Krishna "," Christna ".
Dhalashadiisa waxaa laga filanayay raggii xigmadda lahaa, raggii xigmadda lahaa iyo odayaasha.
Wuxuu is tusay dahab, foox iyo malmal.
Waxaa loogu yeeraa ilaaha adhijirrada.
Waxaa silciyay daalim (Kamsa) oo amar ku bixiyay in la dilo kumanaan caruur yaryar ah.
Wuxuu ahaa dhalashada boqortooyada.
Waxa lagu baabtiisay webiga (Ganges).
Wuxuu sameeyey mucjiso iyo yaabab.
Isagu wuxuu kuwii dhintay ka soo sara kiciyey kuwii buka oo kuwii dhintay ka soo sara kiciyey iyo kuwii dhegaha la'aa oo bogsiiyey.
Wuxuu dadka u adeegsaday masaallo si dadka loo baro sadaqada iyo jacaylka.
Waxa loo beddelay xertiisa hortiisa.
Dhaqannada qaarkood, wuxuu iskutallaabta lagu qodbay inta u dhaxaysa laba tuug.
Wuxuu ka soo sara kacay kuwii dhintay oo wuxuu aaday samada.
Isaga waxaa loo yaqaan "Adhijirka Ilaah" iyo "Sayidka sayidyada", waxaana loo tixgeliyey "Bixiyaha, Curadka, Bixiyaha, Ereyga Caalamiga ah".
Isagu waa qofka labaad ee saddex-midnimada wuxuuna naadiyey naftiisa "sarakicidda" iyo "waddada Aabbaha". * Xertiisii ​​waxay u bixiyeen magaca "Jezeus" oo macnaheedu yahay "nuxur saafi ah". (4)
Dhawr cadeyn oo caddayn ah, arag dokumentiga Zeitgest, in sheekada Krishna iyo ciise ay u waxyoonay tii Heru (Horus), cunuga rabbaaniga ah, ina Aset (Isis) iyo Wusire (Osiris). Qiyaas macquul ah maxaa yeelay waxaan ognahay in Wusire ay ka adkaatay magaalooyin badan oo Hindiya ah, sidaasna ay ku soo bandhigtay dhaqamadii iyo dhaqamadii Masar ee ay aaminsanaayeen. furayaasha. Cunuggii ugu horreeyay ee taariikhda aadanaha oo ay gabadh bikrad ah dhashay 25-kii Diseembar wuxuu ahaa Heru (Horus). Taasi waa 25 BC. Waxaa la baabtiisay da'da 3, wuxuu lahaa 000 xer iwm.
In uu Maktabadda Taariikhda, Diodorus of Sicily wuxuu inoo keenayaa taxaddar aad u muhiim ah oo ku saabsan Wusire:
« Isaga oo ka yimid Itoobiya ayuu (Osiris) wuxuu dib uga bilaabay safarkiisii ​​uu ku dhex marayay Arabsiyo ee ku teedsanaa xeebta badda Ereteriya wuxuuna u gudbay xagga darafyada dhulka la deggan yahay. Halkaas ayuu ka aasaasay magaalooyin aad u tiro badan oo uu midkood u magacaabay Nysa, isagoo doonaya in lagu xusuusto magaaladii (Nysa) ee uu ku soo barbaaray Masar. Wuxuu ku beeray iyskan Hindida ah ee Hindida waana meesha kaliya ee ku taal Hindiya iyo wadamada xadka la leh ee uu geedkani wali ka baxo. Waxa kale oo uu ka tagay calaamado kale oo badan oo ku saabsan joogitaankiisa gobolkan, taas oo u horseeday Hindida markii dambe inay muran ka keenaan Ilaahan, oo ay ku andacoodaan inuu ka soo jeedo qoomiyada Hindida. Osiris wuxuu kaloo ku tababbaray ugaarsiga maroodiga. Meel walba, wuxuu kaga tagay gadaashiisa asagoo markhaati u ah safarkiisa. (5)
Aragtidayda, Ciise runti wuu jiray, laakiin wax shaqo ah kuma lahayn Vatican Ciise oo dhashay 25-kii Diseembar oo loo qaabeeyey 324 shirkii Golaha Nicaea; weliba, ma aaminsani in daqiiqad qudha uu lahaa weji u eg Caucasian, caddaynta qadiimiga ahna waxay burineysaa mala-awaalkan. Dadkii ugu horreeyay ee degay Falastiin iyo Israa’iil (Kancaan iyo Falastiin), iyo diiwaanada Baybalka, waxay ahaayeen “madow”. Xitaa haddii Kitaabka Quduuska ahi caddeeyo inuu ku dhashay Israa'iil, cilmi-baarayaasha qaarkood sida Prof. Sarwat Anis Al-Assiouty, waxay ku caddaynayaan, iyagoo wata caddaymo taageeraya, in Ciise iyo hooyadiis ay asal ahaan ka soo jeedaan Masar (Cf. Ciise MasaaridaTani waxay sharxi doontaa cadeynta John Paul II. 7 May 1980 oo ku taala Nairobi, ayay tiri:
Masiixa laftiisa xubnihiisa jirkiisu waa Afrikaan. »(6) Xiiso badan, sax?
Eray bixin buuxda, haddii Ciise, oo magiciisa saxda ah ee Ciise, uu yahay nin "madow" ama aan muhiimad gaar ah u lahayn, kaliya waxbarashadiisa ayaa ka adkaata, laakiin nasiib darro kuwan waa laga been abuurtay. Masiixiyadda oo nalaga iibiyey 2 sano waxay ujeedkeedu tahay inay aadanaha cabsi geliso: dhimashada oo laga baqo iyo cadaabta oo laga baqo. Waxay aad uga fogtahay diinta kiristaanka ee soo jireenka ahayd oo ku dhisnayd gnosis (Aqoon), oo aan ku salaysnayn caqiido iyo caqiido indha la 'runti waa sheeko xiiso leh sheekadan !!!
« Oo waxaad garan doontaan runta; runtiina waa idin xorayn doontaa. Jean 8: 2
Ubuntu (Anigu, maxaa yeelay waxaan nahay)
(2) Dr.Alfred Bloch, Laga soo bilaabo tartanka ka horreeyay Semitic ee Chaldea iyo Susiana
(3) Aristotle, Physionomy, 6
(4) 100 000 sano ee joogitaanka Afrika ee Aasiya, Runoko Rashidi, 95 boggaga
(4) Muujintii Kitaabka Quduuska ah iyo jaangooyooyinka kale ee diimaha kale, bogagga 326-327
(5) Diodorus of Sicily, Maktabad Taariikh, Book I, 19,6
(6)(John MPISI, John Paul II ee Afrika [1980-2000 by Ed Harmattan, 85).
Yuhuudda Madow: Yuhuudda Madowga ah ee Afrika iyo khuraafaadka tiirarka lumay
4 cusub oo ka yimid € 22,00
8 waxaa laga isticmaalay € 17,11
Iibso € 22,00
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Abriil 9, 2021 5:43
Marcus Garvey: Neefsashada Pan-Africanism
Asal ahaan Afrikaan ah
Akon Iftiiminta Afrika ilaa iftiinka 600 Milyan oo Afrikan ah
Ciyaarta nolosha iyo sida loo ciyaaro - Florence Scovel Shinn (Audio)
La soco Carmallada (2018)
WAAD KU MAHADSAN TAHAY SHARE
Halkan guji si aad u xirto fariintan!
Daaqadani si otomaatig ah ayey u xirmi doontaa ilbidhiqyada 7